First Cobalt übernimmt US Cobalt – Internet-News24
Kurume 19, 2018 connektar.de zvemari News, Business nhau 0
Maererano § 34 WpHG, I dzinoti, kuti JS Research kana vashandi vari boka chero nguva, wana kana kusandura kwema avo migove of anoratidzwa makambani (z.B. refu- kana pfupi zvinzvimbo) anogona. Izvi zvinoshandawo mikana uye nomukaka, kwakavakirwa kuchengetedzeka izvi. Anotenda kuti chero zvichiguma kwema zvinogona nomumwe wekambani wemari mutengo gona. On the “Websites”, ari mugwaronhau kana pakutsvakurudza nemishumo rakabudiswa mashoko, kurumbidza, Kubvunzurudza uye mharidzo boka kubva nhengo makambani kana mapato yechitatu (vanonzi “wechitatu mapato”) unobhadharwa. kuna “wechitatu mapato” zvinosanganisira semuenzaniso. Investor Relations- uye voruzhinji ukama nemakambani, Nevaichinja kana vanoita. JS Research kana ayo anogona vashandi muchikamu zvakananga kana kuti zvisina kunanga kuti kugadzirira, zvemagetsi kuparadzirwa uye mamwe mabasa kubva nyaya kambani kana vanonzi “wechitatu mapato” anofanira remunerated aine wezvokudya. Kunyange kana isu kusika mumwe mushumo, kuti ruzivo yakanakisisa uye kutenda, isu mazano pamusoro mari zvisarudzo zvenyu kunyanya zvekunze zvinyorwa, anoziva z.B. bhangi Your kana chipangamazano iwe kuvimba, kuti bvunza. Naizvozvo, kuti kuita kuti kurasikirwa nemari, izvo zvinogona zvimwe pamusana kukwezvana yezvinhu dzinodudzwa shanduro kuti mari pachavo sarudzo dzavo, categorically kunze. The depositary anogoverana nomunhu mumatanda vanofanira ngaatarire chinhu- uye ubanguranyika mumatanda uye chete mari kune zvakawanda mune diki chivharo pamatanda, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.
Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (vanonzi “Small Caps”) pasi uye kunyanya ubanguranyika tsika uye, vose zvavo, kuchengetedzeka zvose dzakanyorwa vari pamwe zvikuru nokufamba. The liquidity ari kuchengetedzeka kungava akagamuchirawo yakaderera. On oupfumi ari chinhu zvekutepfenyura (ubanguranyika kambani, chinokosha vaburitsi, Makambani kuva upfumi muzvirongwa) inofanira kuchengetwa mamwe njodzi. Mienzaniso chaiyo njodzi iri hazvo zvekutepfenyura: Länderrisiken, mari nokufamba, Njodzi dzinongoitika dzoga uye zvikuru mamiriro ekunze (z.B. nzizi, madutu), Zvakachinja ezvinhu pamutemo (z.B. Ex- uye imupota kurambidzwa, kuri tariffs,, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.